imbonakalo entle etshayelayo, enoxolo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCristiana
Indawo yokuhlala ilungele abantu ababini okanye usapho oluncinci okanye abahlobo. Umbono ovela kwibalcony uyamangalisa. Malunga nemizuzu eli-10 uhamba, kwizinyuko ungafumana indawo yokungena ethandekayo enamatye, elungele ukuqubha; ibizwa ngokuba "la marina".
Le ndlu intle ibekwe kumbindi weCorniglia, kwiVia Serra, enombono omhle wolwandle. Ilungele isibini kwi-honey moon okanye intsapho encinci. Kuyo kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlala elinekona yokupheka (ifriji, umbane kunye ne-oveni yemicrowave, isicinezeli selamuni, izixhobo, iiglasi kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ukwenza ukutya okutsha.); Igumbi lokuhlala linebhedi yesofa, etshintshekayo Ibhedi ephindeneyo.
Igumbi lokuhlambela lineshawa, i-bidet, isomisi seenwele, umatshini wokuhlamba.
Ufikelelo lwe-intanethi ye-wi fi yasimahla ingaphakathi kwindlu.
Umbono ovela kwiifestile kunye ne-balcony buhle: inxalenye yedolophana enezindlu ezinemibala phambi kwakho kunye nolwandle ngakwesokudla nangasekhohlo! Ebusuku kunye nenyanga kunye nenkwenkwezi liphupha!
I-balcony ifanelekile ukuchitha ixesha elizolileyo kunye nokuphumla ngombono omangalisayo, okanye isidlo sakusihlwa sothando.
Kwiflethi akukho moya, i-fan nje, kodwa ineefestile ngaphambili nangasemva kwendlu, ngoko ipholile kakhulu ngexesha lasehlotyeni.
Ibekwe kwi-Via Serra, ekuqaleni kwendlela yeenyawo ye-2 ukuya eVernazza, kwaye kufutshane nohambo lwendlela yeenyawo 7A/6D ukuya eManarola.
Eyona ndlela yokuza apha eCorniglia ngololiwe; ihamba imini yonke kude kube sebusuku kakhulu.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uze eCorniglia ngemoto; eyona ndlela ingcono isuka eLa Spezia, ngoko kuyacetyiswa ukuba uphume kuhola wendlela eLa Spezia/Santo Stefano uze ulandele indlela eya eCinque terre.
Ungadibana nam kwibar "pan e vin" eVia Fieschi 123 eCorniglia.
4.97 · Izimvo eziyi-328
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi328
Izimvo eziyi-2 883
Ndihlala kwaye ndisebenza eCorniglia: undwendwe lwam lungahlala lufika kum xa lusiza kwikhefi yam "bar pan e vin", kufutshane neflethi, apho ndisebenza nomyeni wam uStefano. Ibha iqhele ukuvulwa ukusuka ngo-7 ukuya kutsho ngo-8pm.
Ngexesha lokungena, nceda ube nomonde: sinamagumbi kunye namagumbi kwisakhiwo esahlukileyo kwaye rhoqo sixakeke nezinye iindwendwe. Ixesha elithile liyimfuneko ukulinda imizuzu eyi-15/20.
Ndihlala kwaye ndisebenza eCorniglia: undwendwe lwam lungahlala lufika kum xa lusiza kwikhefi yam "bar pan e vin", kufutshane neflethi, apho ndisebenza nomyeni wam uStefano. Ibha i…